DAAWO-Axmed Karaash oo Garoowe Ku Soo Laabtay Muxuu Ka Qabtay Qardho Ilaa Caasimadda.
Kusimaha Madaxweynaha dowladda Puntland, ahna Madaxweyne ku xigeenka Mudane Axmed Cili Cismaan Karaash oo maalahan socdaal ku marayay gobolada Kar-kaar iyo Bari waxaa si ballaan loogu soo dhaweeyay degmada Dangoryo ee gobolka Nugaal.
Soo dhawaynta Madaxweyne ku xigeenka waxaa ka qayb qaatay Maamulka Gobolka Nugaal, kan degmada Dangoroyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa u mahadnaqay dadweyhihii soo dhaweeyay, waxaana intii uu ku sugnaa degmada Dangoroyo uu xarig ka jaray Maqaaxi lagu magacaabo New Doog oo ganacsato ay ka hirgalisay, halkaas oo qado sharaf loogu sameeyay, isagoo ammaanay horumarka ka socda degmada oo tani ay qayb ka tahay.
Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka ayaa ganacsatada Dangoroyo ku booriyay inay sii laba jibbaaran qorshayaasha ay horumarinayaan degmadan, waxaana uu tilmaamay ka dowlad ahaan inay dhankooda wax walba ay diyaar ula yihiin.
Kusimaha Madaxweynaha ayaa ugu danbayn dhagax dhigay dhamaystirka Dugsiga Sare ee Degmada Dangoroyo, waxaana intaasi kadib uu uga soo gudbay Caasimadda Garoowe, kadib markii uu u soo dhammaaday socdaal afar cisho qaatay oo uu ku maray gobolada Nugaal, Kar-kaar iyo Bari.